Pep Guardiola oo fariin adag u diray Liverpool | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Pep Guardiola oo fariin adag u diray Liverpool
Macalinka kooxda Kubada cagta Manchester City, Pep Guardiola ayaa digniin u diray kooxda ay isku haleeli doonaan lugta labaad ee Champions League ee Liverpool oo ciyaartii hore ku garaacday 3-0.
Guardiola waxa uu sheegay in kooxdiisu ay si fiican oo togan uga hor tegi doonto Liverpool, waxa kaliya ee ay isha ku hayaanna ay tahay inay kubbad qurux badan ciyaaraan, taas oo ah sida ay kaga gudbi karaan natiijada kulankii hore.
Tababare Pep Guardiola oo ay iskugu xigtay laba guul darro oo Liverpool iyo Manchester United ay u xambaariyeen, waxa uu qiray inay u ahayd toddobaad ku adag marka la eego guul-darrooyinka ay la kulmeen.
“Sida kaliya ee kubbad wanaagsan loo ciyaari karaa waa in la niyad-samaado. Si aad usoo baxdana waa inaad dhinaca wanaagsan wax ka eegto, fursado samayso, iskana difaacdo in goolal lagaa dhaliyo. Fursadaha aanu helno waa inaanu qaadanno, si fiicanna isku difaacno.” Sidaas ayuu yidhi Guardiola.
Tababare Pep waxa uu xusay inay haystaan ciyaar 90 daqiiqadood ah oo ay wax walba dhici karayaan, ujeeddadooduna tahay inay guul helaan.
“Waxa aanu haysanaa 90 daqiiqadood, wax walbana way dhici karayaan, waxaananu doonaynaa in aanu isku dayno (guul). Waxa aanu haysanaa 90 daqiiqo iyo wakhti dheeraad ah, sida aanu sannadkan muujinayna, illaa daqiiqadda ugu dambaysa waxa aanu abuuri karnaa fursado badan, xattaa daqiiqadaha yar ee ugu dambeeya.” ayuu raaciyey.
Mar la weydiiyey in kooxdiisa ay labadii guul-darro ee isku xigay maskixiyan u dhaawaceen, waxa uu ku jawaabay: “Ma garanayo, laakiin, ma xamili karno (guul-darrooyinka) saykoolaji ahaan, balse waxay noo noqon doontaa cashar mustaqbalka.”